Quseyso adiga oo ah magangelyodoon iyo doonaayo inaa baratid luqada iswiidhishka - Migrationsverket
/ Intaa adiga suganeysid
/ Barashada luqada iswiidhishka
Quseyso adiga oo ah magangelyodoon iyo doonaayo inaa baratid luqada iswiidhishka
Lära sig svenska – somaliska
Haddii aad haysatid ruqsada deggenaanshada oo Iswiidhan iyo iska diwaangalisay meesha diwaangalinta bulshada waxaad xaq u leedahay barashada luqada iswiidhishka oo dadka ajnabiga, oo xitaa loo yaqaan sfi. Laakiin haddii aad dooneysid inaad baratid luqada iswiidhishka intaa sugeysid go’aanka waxaa jiro ururo samafal iyo ururo waxbarasho oo kugu martiqaadi koox aad isla baratiin iswiidhishka.
Kooxyada waxbarashada oo iswiidhishka
Waxaa la heli dhowr oo ururada waxbarashada oo ku martiqaadi dadka magangelyodoonka ah kooxyada waxbarashada oo iswiidhiska iyo warbixinta mushtamaca. Kooxyadad waxbarashada waxaa isku imaan dad iyo isla wada baranaayaan luqada iswiidhishka. Kooxdaas waxey waxbarashada isla wada qorsheynaayaan sidey doonaayaan. Waxey fursad u tahay oo ka qeyb-galikaro adiga oo sugaayo arrintaada oo sharciga deggenaanshada in go’aan laga gaaro iyo adiga oo helay oggolaaday sharciga deggenaanshada laakiin wali ku nool guryaha dadka magangelyodoonka. Ka qeyb-qaadashada waa bilaash. Haddii loo baahdo Hey’adda socdaalka baa bixin qarashka safarka markaa tageysid kooxda waxbarashada. Haddii adiga magangelyo aad wadankale oo yurub kamid ah ka codsatay, haddii adiga heshay go’aan oo wadan bixid ama tarxiilid ama iska muuqato in adiga u laheen xaq oo sharciga deggenaanshada Iswidhan adiga baa iska bixin qarashka safarka haddii aad dooneysid inaad kamid qaadatid kooxda waxbarashada.
Haddii adiga dooneysid inaad ka qeyb-qaadatid kooxda waxbarashada oo iswiidhishka adiga waxaad la xiriiri ururka waxbarashada oo meesha aad ku nooshahay. Sidaa warbixin uga heshid ururada waxbarashada oo bixiyaan kooxyada waxbarashada oo iswiidhishka oo magaaladaada waxaad la soo xiriiri kartaa qeybta qaabilaada oo adiga kugu shaqo leh.
La tababaro iswiidhish ururada samafalka
Ururo samafal oo badan baa isku dabaridaan barasho iswiidhish ama makhaayad luqadeed oo loogu talagalay dadka magangelyodoonka. Haddii adiga dooneysid ururada adiga kaa caawinkaro tababarashada iswiidhishka adiga waxaad la soo xiriirtaa qeybta qaabilaada oo adiga kugu shaqo leh.
Adiga gacantaada iswiidhishka ku baro
Internetka waxaa laga heli barnaamishyo badan oo luqada iswiidhishka adiga is bareysid. Isku xiriiriyaasha barnaamishyadaas adiga waxaad ka heli www.informationsverige.se. Barnaamishyadaas inta ugu badan waxey isticmaalkooda u baahanyahay qad internet. Dhammaan waa bilaash.
Bogga oo Barashada luqada iswiidhishka adiga waxaad ka heli dhammaan isku xiriiriyaasha (www.informationsverige.se)
Kaarka LMA oo quseeyo magangelyodoonka
Daryeelka caafimaad ee magangalya doonka
Caawimada maaliyadeed ee magangalya doonka
Barashada luqada iswiidhishka